ICarbon Fibre vs Aluminium
Ityhubhu yeCarbon Fibre
Isiqhamo sokuthwala iziqhamo
Ingcinezelo High Ukuhlamba Pole
Ukucoca iPhaneli yeSola
Ipeyinti yokucoca ifestile
Oko Kuthethwa ngabaThengi bethu
I-Carbon fiber ithatha indawo ye-aluminium kukwanda kwezicelo kwaye ibisenza njalo kule minyaka ingamashumi idlulileyo. Ezi fayibha ziyaziwa ngamandla abo ahlukileyo kunye nokuqina kwaye zikwanobunzima obukhulu. Imisonto yefayibha yeCarbon idityaniswe nentlaka eyahlukeneyo ukwenza izinto ezidityanisiweyo. Ezi zinto zidibeneyo zithatha ithuba kwiipropati zombini zefiber kunye nentlaka. Eli nqaku libonelela ngokuthelekisa iipropathi zecarbon fiber xa ithelekiswa nealuminium, kunye nezinye izinto ezilungileyo nezingalunganga zento nganye.
Umgangatho weCarbon Fibre vs Aluminium
Apha ngezantsi kukho iinkcazo zeepropathi ezahlukeneyo ezisetyenziselwa ukuthelekisa ezi zinto zimbini:
I-Modulus ye-elasticity = "ukuqina" kwezinto. Umlinganiselo woxinzelelo kuxinzelelo lwezinto ezithile. Ithambeka loxinzelelo vs i-curve curve yento ethile kwingingqi yayo e-elastic.
Amandla okuqina okugqibela = uxinzelelo oluphezulu izinto ezinokumelana nazo ngaphambi kokuqhekeka.
Ubuninzi = ubunzima bezinto kwiyunithi yevolumu.
Ukuqina okuthe ngqo = Imodyuli yokuqina kwokwahlulahlula ubungakanani bezinto. Isetyenziselwa ukuthelekisa izinto ezinobunzima obungafaniyo.
Ukuqina okuthe ngqo = Amandla okomelela ahlukaniswe kukuxinana kwemathiriyeli.
Ngolu lwazi engqondweni, itshathi elandelayo ithelekisa i-carbon fiber kunye ne-aluminium.
Qaphela: Zininzi izinto ezinokuchaphazela la manani. Ezi zizinto eziqhelekileyo; hayi imilinganiselo epheleleyo. Umzekelo, izinto ezahlukeneyo zekhabhoni zefayibha ziyafumaneka ngokuqina okuphezulu okanye ukomelela, rhoqo kurhwebo lokunciphisa ezinye iipropathi.
Imilinganiselo ICarbon Fibre IAluminiyam Ikhabhoni / iAluminiyam
Imodyuli yokuqina (E) GPa 70 68.9 100%
Amandla eqine (σ) MPA 1035 450 230%
Ukuxinana (ρ) g / cm3 1.6 2.7 59%
Ukuqina okuthile (E / ρ) 43.8 25.6 171%
Amandla athile athile (σ / ρ) 647 166 389%
Le tshathi ibonisa ukuba ifayibha yekhabhoni inamandla athile aqine malunga namaxesha e-3.8 e-aluminium kunye nokuqina okuthile kwamaxesha e-1.71 e-aluminium.
Ukuthelekisa iipropathi ezishushu zecarbon fiber kunye nealuminium
Ezinye iipropathi ezimbini ezibonisa umahluko phakathi kwefayibha yentsimbi kunye nealuminium kukwandiswa kobushushu kunye nokuqhutywa kobushushu.
Ukwanda kobushushu kuchaza indlela ubungakanani bezinto obutshintsha ngayo xa amaqondo obushushu etshintsha.
Imilinganiselo ICarbon Fibre IAluminiyam IAluminiyam / Ikhabhoni
Ukwandiswa kobushushu 2 kwi / kwi / ° F. 13 kwi / kwi / ° F. 6.5
I-Aluminium inamaxesha amathandathu ukwanda kwe-carbon fiber.
Xa kuyilwa izinto eziphambili kunye neenkqubo, iinjineli kufuneka zichonge ukuba zeziphi iipropathi zezinto ezibaluleke kakhulu kwizicelo ezithile. Xa amandla aphezulu ukuya kubunzima okanye ubunzima bokuqina ukuya kubunzima, icarbon fiber lukhetho olucacileyo. Ngokweyilo lolwakhiwo, xa ubunzima obongezelelweyo bunokunciphisa imijikelo yobomi okanye bukhokelele ekusebenzeni gwenxa, abayili kufuneka bajonge kwikhabhoni yefayibha njengezinto ezingcono zokwakha. Xa ubunzima bubalulekile, ifayibha yekhabhoni idityaniswa ngokulula kunye nezinye izinto ukufumana iimpawu eziyimfuneko.
Iipropathi zeCarbon fiber ezisezantsi zokukhulisa ubushushu ziluncedo olukhulu xa kusenziwa iimveliso ezifuna inqanaba eliphezulu lokuchaneka, kunye nozinzo lobume kwiimeko apho amaqondo obushushu ehla-hamba: izixhobo zamehlo, izikena ze3D, iiteleskopu, njl.
Kukho izinto ezimbalwa ezingeloncedo ekusebenziseni i-carbon fiber. Ifayibha yekhabhoni ayivelisi. Ngaphantsi komthwalo, i-carbon fiber iya kuguqa kodwa ayiyi kuhambelana ngokusisigxina nesimo esitsha (i-elastic). Xa amandla e-carbon fiber agqityiweyo e-carbon fiber egqithile ngequbuliso. Iinjineli kufuneka zikuqonde oku kuziphatha kwaye zibandakanye nezinto ezikhuselekileyo zokuziphendulela xa kuyilwa iimveliso. Amalungu e-Carbon fiber nawo abiza kakhulu kune-aluminium ngenxa yexabiso eliphezulu lokuvelisa ifayibha yekhabhoni kunye nobuchule obukhulu kunye namava abandakanyekayo ekudaleni izinto ezikumgangatho ophezulu.
Ixesha Post: Jun-24-2021
Phantse iminyaka eli-15 yamava okuvelisa kukuqinisekisa umgangatho weemveliso zethu.
Daxizhuang, Yangting Town, District Huancui, Weihai City, Shandong, China